Kadib 20 sano, Itoobiya oo dib u furatay Safaaradeeda Eritrea [Sawirro]
ASMARA, Eritrea - Dowladda Federaalka ah ee Itoobiya ayaa 20 sano kadib dib u furtay maanta oo Khamiis ah safaaradeeda ku taala caasimada dalka Eritrea ee Asmara taasoo qeyb ka ah heshiiska soo celinta xiriirka labada wadan.
Munaasabadda dib-furitaanka waxaa goobjoog ahaa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, Madaxwaynaha Eritrea, Isaias Afwerki iyo mas'uuliyiin sare oo labada dowladood ka kala socday.
Bishii July ee sanadkaan 2018, Ethiopia ayaa safaaradeeda Asmara usoo magacowday Danjire Redwan Hussein, todobaad kadib markii Eritrea ayaa dhankeeda dib u furtay safaaradeeda magaalada caasimada ah ee Addis Ababa.
Labadaan dowladood ayaa waxaa ka dhaxaysay colaado muddo 20 sano ah, taasoo laga dhax-lay dhimashadda dad badan, laakiin markii uu Abiy Axmed xafiiska la wareegay bishii April 2018 ayey arrimuhu isbedaleen, oo heshiis taariikhi ah laga gaarey.
Abiy Axmed ayaa booqasho lama filaan ah ayuu July 2018 ku tegay Amsara, isagoo kula soo saxiixday magaaladaasi Madaxwayne Afwerki kaasoo lagu soo afjaray colaaddii ka dhaxaysay Eritrea iyo Itoobiya tan iyo 2000.
Dib-ufuridda safaraadaha labadda dowladood ayaa qayb ka ahaa heshiiska ay kala saxiixdeen labadda hogaamiye, taasoo ay sheegeen inay kusoo celinayaan cilaaqadda labadda dhinac.
Eritrea oo horey u ahaa dal ka tirsan Itoobiya ayaa xorriyadda ka qaatay 1993-dii kadib dagaalo ay ku dhinteen dad ka badan 80,000 oo qof ah, kuwaasoo isugu jiray Askar iyo shacab.
Mid kamida Wasiiradii ugu caansanaa Itoobiya oo xabsiga la dhigay
Afrika 23.01.2019. 12:36
Abiy Axmed ayaa balan qaadey inuu la dagaalamayo musuq-maasuq dalka Itoobiya.
Afrika 18.07.2018. 15:28
Mooshin laga gudbiyay heshiisyaddii Farmaajo uu saxiixay [Akhri]
Soomaliya 05.12.2018. 23:10